२३ अङ्कले घट्यो नेप्से - Nepal Samaj
१४ साउन, २०७७नेपाल समाजअर्थ
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से २३.३६ अङ्कले घटेर एक हजार ४३१.५२ मा रोकिएको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ५।१८ अङ्कले घटेर ३००.४९ मा झरेको छ ।
कारोवार रकमका आधारमा नेपाल पुनःबीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो । सो कम्पनीको शेयर रु. १५ करोड ७१ लाख १०५ मा खरिद बिक्री भयो । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको रु. १० करोड ८१ लाख ३३ हजार ५००, एनआइसी एशिया बैंकको रु. आठ करोड ८८ लाख २४ हजार १४२, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रु. आठ करोड ८७ लाख ५२ हजार २१३, एनएमबी बैंकको रु. पाँच करोड ६५ लाख १८ हजार ६९२ र हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको रु. चार करोड ७५ लाख २३ हजार ८८३ बराबरको शेयर कारोबार भई अग्रस्थानमा रह्यो ।
महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई १७ अर्ब ५५ करोड दिने